Wholesale iPhone 12 akateedzana Corning Gorilla yakanyorovera girazi screen mudziviriri Mugadziri uye Mutengesi | OTAO
Kwemakore angangoita 170, Corning yakabatanidza hunyanzvi hwayo husingaenzaniswi mugirazi sainzi, ceramics sainzi, uye Optical fizikisi ine yakadzika yekugadzira neinjiniya kugona kusimudzira hupenyu-hunoshandura hutsva uye zvigadzirwa.
Kuti ugopa yakakwira mhando yegirazi inodzivirira, OTAO tarisa pakugadzira corning girazi dziviriro yekusangana nevatengi vakasiyana vanoda munyika.
Kunyanya kugadzirwa kubva kuCorning's Gorilla Girazi ino inodzivirira inozvidzivirira kwekupedzisira kwechidzitiro, ichichengetedza yakajeka yakajeka skrini uye kubata kwekunzwa.
corning girazi inobatsira kudzivirira yako iPhone skrini kubva pamadonhwe, kukanganisa, uye kupfeka kwemazuva ese. Gorilla Girazi rakaomarara kupfuura simbi dzakajairika dzaunowana mumakiyi nemapanga, uye inogona kubata kukandwa pasi kakawanda.
YAKANAKA FIT Girazi Kudzivirirwa
Iyo chaiyo yakatemwa kuti inyatso kukwana yako iPhone.
Precision yekucheka dhizaini inogona kuve inodzivirira foni yako zvirinani, uye inoenderana nemazhinji emakesi emakesi akakwana.
OTAO Corning Gorilla Girazi Kubatsira
Yakagadzirwa kubva pamvumo yeCorning Gorilla Girazi
Inopa kugona kwakanyanya uye kukwikwidza.
Ultra-yakasimba chengetedzo ine inosvika ku2x yakakura kukwenya kuramba kupfuura inotungamira girazi imwe nzira *
Inesarudzo ukobvu: 0.33mm, 0.2mm, 0.1 mm.
Pashure: iPhone 12 yakateedzana kamera lens girazi dziviriro
Zvadaro: iPhone 12 yakateedzana Camera Lens Mudziviriri
iPhone 2.5D PMMA skrini inodzivirira Haina kumboputswa ...